Fanaraha-maso kalitao - CHANGZHOU DEDGE DECORATIVE MATERIAL CO., LTD
QUALITY PRODUCT FLOORING
Amin'ny maha mpamatsy tokana tokana ny rindrina sy ny rindrina rindrina, ny fifehezana kalitao henjana dia tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny orinasa. Noho izany, manana fanaraha-maso feno izahay avy amin'ny sampana fanaraha-maso kalitao ary fanaraha-maso tsy an-kanavaka ataon'ny mpanara-maso kalitaon'ny antoko fahatelo amin'ny dingan'ny famokarana.
Raiso ohatra ny gorodona SPC. Amin'ny dingana voalohany amin'ny fitrandrahana, isaky ny 10-30 minitra, ny sampana fanaraha-maso kalitao dia hijerena ny habeny, ny gorodona ambonin'ny tany ary ny endrik'ilay vokatra semi-vita.
Ny dingana faharoa dia ny fitsapana ny gloss ny gorodona spc. Satria ny tsena isan-karazany dia manana fepetra takiana amin'ny gloss ambonin'ny gorodona spc, hampiasa photometre izahay hizaha toetra ny andiany tsirairay avy ary hampitaha azy amin'ny fepetra takian'ny fifanarahana.
Ny dingana fahatelo dia mahita ny fahasamihafana eo amin'ny habeny sy ny haavony. Raha jerena ny zava-misy fa maro ny mpanjifa no nividy ny gorodona teo aloha dia tsy maintsy ampifanarahintsika ny habeny alohan'ny takiana ny habe, mba hahafahan'ny entana roa mivondrona tsy misy olana.
Faharoa, amin'ny iray amin'ireo fanaraha-maso tsara, ny fitsapana ny fahasamihafana eo amin'ny haavony, ity no ampahany manandanja indrindra amin'ny fizahana ny gorodona, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny fisehoan'ny vokatra ary mitsikera koa raha matihanina ny mpamatsy.
CONTROL QUALITY WALLS
Amin'ny ankapobeny, WALL dia mizara ho valin'ny rindrina anatiny sy ivelany. Tsotra ny valin'ny rindrina, saingy tsy mora ny misafidy. Mba hisafidianana tontonana rindrina avo lenta sy lafo vidy dia mila fantatrao aloha ny fomba hijerena ny kalitao. Amin'ny maha mpanamboatra valiha matihanina anay dia mijery ny lafiny rehetra amin'ny famokarana izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny rindrin-tsolika.
Voalohany indrindra, ny loko, satria ireo takelaka rindrina dia vita amin'ny sarimihetsika miloko plastika, izay mahatonga ny loko maromaro samy hafa na kely kokoa ny lokony. Mba hisorohana ny tsy fitovian'ny loko lehibe dia hamela santionany amin'ny fampitahana amin'ny andiany tsirairay izahay.
Faharoa, ny fahitana ny habeny, satria ny habe samihafa dia hampiasa akora akora samihafa, misy fiantraikany mivantana amin'ny vidin'ny takelaka misy rindrina. Ary arakaraka ny haben'ny habe, ny haben'ny hateviny, ny matanjaka eo amin'ny tontonana rindrina
Avy eo apetraka sy hizaha toetra, ny takelaka rindrina dia fametrahana hidin-trano, tsy maintsy vorina sy hosedraina alohan'ny handaozany ny ozinina mba hahazoana antoka fa milalao ny tontolon'ny rindrina azon'ny mpanjifa. Mpanjifa vahiny maro no tia mividy azy ary mametraka azy irery. Tena zava-dehibe ny fanaraha-maso ny ozinina.
Ny farany dia ny fizahana kalitao anatiny amin'ireo takelaka misy rindrina, izay tsy may afo, tsy mahazaka rano ary mahatohitra UV. Ataovy azo antoka ny fampiasana maharitra ny takelaka rindrina